အာရ်ကန်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဘယ်သူပိုင်တာလဲ ရိုဟင်ဂျာလား ရခိုင်လား | Lumyo Chit
အာရ်ကန်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဘယ်သူပိုင်တာလဲ ရိုဟင်ဂျာလား ရခိုင်လား
လွန်ခဲ့သော လပိုင်းများအတွင်း မြန်မာ သန်းစိန်အစိုးရ ပါလီမန်ထဲတွင် ရိုဟင်ဂျာတို့၏ အခွင့်အရေးများနှင့် ပတ်သက်၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ မေးမြန်မှုများရှိခဲ့ရာ ၀န်ကြီး ခင်ရီ အပါအ၀င် အခြားဝန်ကြီး အချို့က ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး စံကို ဆန့်ကျင်ပြီး အောက်တန်းကျကျ၊ လူမျိုးဘာသာ အစွန်း ရောက်သူများပီပီ ဖြေဆိုခဲ့သည်ကို တစ်ကမ္ဘာလုံး အထူးအံ့သြခဲ့လေသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ပြောဆိုမှုကြောင့် ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေကြောင်း ပြောဆိုချက်များကို နဂိုက သံသယရှိ နေသောသူများအဖို့ သန်းစိန်အစိုးရ အနေဖြင့် ကမ္ဘာကို လိမ်ညာနေကြောင်း ထောက်ပြသက်သေထူနိုင်ရန် လုံလောက် ခိုင်လုံသော သာဓကတစ်ရပ်ဖြစ်လာရပါသည်။
ဤသည်ကိုပင်နားမလည်သော အစွန်းရောက် ရခိုင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးသမားဆိုသူများနှင့် RNF ရခိုင် အမျိုးသားတပ်ဦး ခေါင်းဆောင်များသည် ထိုလွှတ်တော်မှ ပြောဆိုရှင်းလင်းခဲ့သည့် အချိန်အခါကို အခွင့် ကောင်းယူ၍ ရန်ကုန်မြို့၌ အခမ်းအနားတစ်ရပ်ကျင်းပကာ Arakan ဟူသော အသုံးအနှုန်းသည် ရခိုင်အမျိုး သား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့်သာ သက်ဆိုင်ကြောင်း အရှက်အကြောင်းကင်းကင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီး၊ ထိုအသုံးအနှုန်းကို အလွှဲသုံးစားမလုပ်ရန် တောင်းဆိုလာလေသည်။ ထိုတောင်းဆိုမှုနှင့်ကိုက်ညီသည့် ထောက်ခံပြောဆိုမှုများကို ပြည်ပရောက် ရခိုင်အစွန်းရောက်ဝါဒီများကလည်း အမျိုးမျိုးပြုလုပ်လာခဲ့ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပေသည်။ ယင်းတို့သည် ထို Arakan ဟုခေါ်သော အသုံးအနှုန်းသည် ယင်းတို့နှင့်မသက် ဆိုင်ကြောင်း ပြောဆိုပြီး၊ ၁၉ရ၄-ခုနှစ်တွင် ”ရခိုင်” ဟူသောအခေါ်အဝေါ်ကို အစားထိုးကာ ”ရခိုင်ပြည်နယ်” ဟူ၍ ခေါ်ထွင်ခဲ့သည်ကိုပင် သတိမေ့ဟန်တူလေသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ထိုတောင်းဆိုမှုကို မှန်ကန်သော လုပ်ရပ်အဖြစ်ထောက်ခံရာတွင် သမိုင်းပညာရှင်ဆိုသူ ဒေါက်တာ အေးချမ်းက သမိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အ လက်အချို့ကို အောက်ပါအတိုင်း လိမ်လည်ဖော်ပြလာသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။
မိမိလိုရာကို လုပ်ကြံဖန်တီး သရုပ်ဖော်နိုင်ရန် သမိုင်းပညာရှင်ဟူသော အခွင့်အရေးကို အသုံးချပြီး မိမိအား ယုံကြည်ထောက်ခံသူများအား လှည့်စားသည့် အရေးအသားများကို သုံးသပ်တင်ပြရမည်ဆိုပါက၊ အောက် ပါ ဒေါက်တာအေးချမ်း၏ အရေးအသားကို လေ့လာကြည့်စေလိုပါသည်။
It was I, who gaveatalk about the term Arakan. I clearly pointed out how this term derived from Rakhine in the Portuguese Rakan or “Arakan or Aracao giving reference to original references in Portuguese. A historian is always loyal to the truth.” (Aye Chan)
ရေးသားထားသည့် အနေအထားမှာ အလွန်သြဇာရှိပြီး၊ တာဝန်ခံမှု အပိုင်းတွင်လည်း အထက်ဖော်ပြချက် သည် ယုံမှားသံသယ လုံးဝ မရှိစေရန် အပိုင်ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤဖော်ပြချက်မျိုးကို သမိုင်းဟု ထင်မိရန်မှအပ မရှိတော့ပါ။
အမှန်မှာ ဤဖော်ပြချက်သည် သမိုင်းပညာရှင် တစ်ဦးမှ ရေးသားသည်မှန်သော်လည်း သမိုင်းကို မုဒိမ်းကျင့် ရေးသားခြင်းသာလျှင် ဖြစ်ပေသည်။ တနည်းပြောရမည်ဆိုလျှင် ဒေါက်တာအေးချမ်းကို သမိုင်းပါမောက္ခဟု ယုံကြည်ကိုးစား နေသူများအားလည်း စော်ကားခြင်းတစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဖော်ပြခြင်းကို လေးလေးနက်နက် ဆင်ခြင်မိပါက သမိုင်းမှန်ကို ထိန်းချန်လိုခြင်းတစ်ရပ်ဖြစ် ကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြလိုပါသည်။
အထက်ပါ ဒေါက်တာအေးချမ်း၏ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ရေးသားသည့် အချက်ကိုထောက်ပါက မေးခွန်းထုတ်လိုသည့် အချက်တစ်ချက်မှာ- ရခိုင်ကို “Rakan သို့ Arakan သို့ Aracao ဟု ပေါ်တူဂီများက စတင်အမည်ထွင်ပေးဒါ လား၊ သို့၊ ပေါ်တူဂီများ ထိုဒေသကို မရောက်မီကတည်းကပင် ထိုဒေသကို Arakan ဟု လူသိခဲ့တာလား-ဟူသည့် အချက်ဖြစ်ပါသည်။
ဒေါက်တာအေးချမ်း၏ အလိုအရ ထို (Rakan, Arakan နှင့် Aracao) ဆိုသည့် စကားလုံးများသည် ပေါ်တူ ဂီစကားလုံး ဖြစ်သည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရောက်နေပါသည်။ ထိုအတိုင်းမှန်ပါက ပေါ်တူဂီများသည် ထိုဒေသသို့ မည်သည့်အချိန်ကစ၍ စတင်ရောက်ရှိခဲ့သနည်း။ လေ့လာစူးစမ်းမှုများအရ ပေါ်တူဂီများ ရောက်ရှိနေသည့် ကာလသည်၊ ၁၄၉၈-ခု ပေါ်တူဂီနိုင်ငံသား ဗက်စကိုး ဒဂါးမား အိန္ဒိယကို ရေကြောင်းအရ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ သည့် နောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုမတိုင်ခင် ရခိုင်တွင် ဝေသာလီခေတ်၊ ဓည၀တီခေတ်၊ လေးမြို့ခေတ်၊ မြောက်ဦးခေတ် အစရှိသည့် အုပ် ချုပ်မှုများ မြောက်များစွာ ရှိနေခဲ့သည်။ ထိုသို့လွတ်လပ်စွာ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည့် ဘုရင်နိုင်ငံတစ်ခုသည် အမည်မဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ခု ဟုတ်နိုင်ပါ့မည်လားဟု စောဒက တက်ရန်လိုသည်။ ထိုကဲ့သို့ စောဒကတက်သည်နှင့်အတူ ရခိုင်ဟူသော အခေါ်အဝေါ်သည် အေးချမ်းတင်ပြသကဲ့သို့ ပေါ်တူဂီစကားလုံးမူရင်း မဟုတ်သည်ကိုလည်း ရှင်းပြရန်မလိုပေ။
အမှန်မှာ ပေါ်တူဂီများမရောက်မှီ နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာကတည်းက ထိုဒေသသို့ အာရဗ်ကုန်သည်များ လှည့်လှယ်ရောက်ရှိနေသော ဒေသဖြစ်ပါသည်။ အာရပ်တို့သည် အေဒီ-ဂ ရာစုမှစ၍ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ် ကြောင်း ဒေါက်တာအေးချမ်းကိုယ်တိုင် သူ့စာအုပ်များတွင် ရေးသားဖော်ပြထားသည်။ အာရဗ်ကုန်သည်များ ၏ ခရီးသွားမှတ်တမ်းများအရ ထိုဒေသကို ယင်းတို့က Ar-Rukun ဟု ခေါ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ပေါ်တူ ဂီများသည် ထိုအခေါ်အဝေါ်ကို အစွဲပြု၍ Rakan သို့ Arakan သို့ Arcao ဟု ခေါ်ထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရိုး ရိုးရှင်းရှင်း မရေးတော့ဘဲ၊ ထိုအခေါ်အဝေါ် အာရဗ်တို့မှ ဆင်းသက်သည်ဟူသော အဆိုကို ရှောင်ရှားလို သောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ လိုရာဆွဲ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သမိုင်းပညာရှင်များသည် အမှန်တရားကို မြတ်နိုးသည်-ဟူ၍ ဟုတ်တိပတ်တိ ရေးသားပြီး သမိုင်းပညာရှင် တစ်ဦးအဖြစ် သူ့ကို လေးစားသူများအား လှည့်စားလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါသည်။
This entry was posted in Untags and tagged Rohingya. Bookmark the permalink.
ဒေါက်တာအေးချမ်း ရိုဟင်ဂျာ သမိုင်းလိမ်ပြီ →